उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्वविहीन हुन नदिन आफूले अहिलेसम्म राजीनामा नदिई बसेको बताएकी छिन् । संसद सचिवालयमा राजीनामापत्र बुझाएपछि संसद भवन बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै तुम्बाहाङ्फले संविधानले नै प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्वविहीनको कल्पना नगरेकाले अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
सभामुख चयनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको शक्तिसंघर्ष टुंगिएको छ । नेकपा सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै प्रतिनिधिसभालाई सभामुखको चुनाव गराउने बाटो खुलेको छ ।
यसरी टुंगियो नेकपामा सभामुखका लागि भएको ‘शक्तिसंघर्ष’
साढे तीन महिना लामो पेचिलो बहस र विवादपछि नेकपाले नयाँ सभामुखका लागि अग्‍नि सापकोटाको नाममा लालमोहर लगाएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको विषयमा नाटकीय रुपमा सहमति जुटेपछि कुन ‘फ्याक्टर’ ले काम गर्‍यो होला भनेर चासो व्यक्त भइरहेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उमेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सापकोटालाई सभामुखको उमेद्वार बनाउने निर्णय गरेको नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बताए ।
आखिर किन बालुवाटार जान चाहेनन् दाहाल ?
मंगलबार दिउँसो चितवनको माडी पुगेर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘समय भएर म माडी आएको होइन ।तपाईंहरुले देख्नुभएको छ, केन्द्रीय राजनीतिमा कहिलेकाहीं जटिलता देखा पर्न खोज्छन्...बेलुका फर्किएपछि थुप्रै बैठक गर्नुपर्नेछ ।’ यस्तो भाषण गर्दै त्यसै दिन साँझ काठमाडौं फर्केका दाहालले बिहीबार दिउँसोसम्म शीर्ष संवाद गरेनन् ।
सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नसकेर प्रतिनिधिसभा नै बन्धक बनिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भने गत आइतबारदेखि औपचारिक भेट र संवाद भएको छैन ।
ओली-दाहाललाई तुम्बाहाङ्फेको जवाफ : राजीनामा गराउने निर्णय फिर्ता लैजानुस् !
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेकपा सचिवालयले राजीनामा दिन गरेको निर्देशन नमान्ने बताउँदै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई निर्णय फिर्ता लिन भनेकी छन् । आइतबार बिहान बालुवाटारमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई बोलाएर अध्यक्षद्वयले राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए । सो बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलको पनि उपस्थिति थियो ।
प्रतिनिधिसभालाई दलगत अनिर्णयको बन्दी नबनाउन कांग्रेसको चेतावनी
प्रतिपक्षी कांग्रेसले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभालाई दलगत अनिर्णयको बन्दी नबनाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । सूचना टाँसेर स‌ंसद बैठक ८ दिन सारिएपछि कांग्रेसले सरकार र सत्तारुढ दल नेकपालाई तत्काल निकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सचेत गराएको छ ।
भैंसेपाटी भेलाले जन्मायो ओली-दाहालबीच अविश्वास
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका पाँच सदस्यबीचको गोप्य भेटघाटलाई लिएर नेकपाभित्र हलचल पैदा भएको छ । यसको सबभन्दा ठूलो तरंग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देखिएको छ ।
आइतबारका लागि बोलाइएको संघीय संसद अर्न्तगत प्रतिनिधिसभाको बैठक माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
सभामुख चयन अन्योलमै
सत्तारूढ नेकपाले उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसकेपछि सभामुख चयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । कार्यतालिकाअनुसार सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार बस्नुपर्ने हो । तर नेकपाले उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसकेकाले बैठक बोलाउने/नबोलाउने अन्योल बढेको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
भोलिको बैठक मै चलाउँछु, राजीनामा दिन्न : उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे
नेकपा सचिवालयले राजीनामा गर्न निर्देशन दिएपनि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भोलि (आइतबार) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक आफैंले सञ्चालन गर्ने बताएकी छन् । इकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भनिन्- 'नेताहरुसँग मेरो कुरा बाँकी छ, राजीनामा दिन्न ।'
प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले साझा उम्मेदवार तय गर्न नसकेपछि सभामुख चयनको विषय झन् सकसपूर्ण बनेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच करिब तीन घण्टा भएको छलफल पनि टुंगोमा पुग्न सकेन ।
उपसभामुखले राजीनामा नदिँदा रोकियो नेकपामा सभामुख चयनको निर्णायक संवाद
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा नआएका कारण नेकपामा सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने संवाद थप पेचिलो भएको छ । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पहिला उपसभामुखको राजीनामा वा नयाँ सभामुखको खोजी भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।
सभामुख निर्वाचन ढिलाईप्रति कांग्रेस सांसदको चेतावनी, 'यो मुद्दा अदालतमा जान सक्छ'
कांग्रेसले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा बिहीबार विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख चयन प्रक्रियालाई आगामी बैठकबाट कुनै पनि हालतमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे ।
सभामुख चयनमा निर्णयविहीनता
सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको खिचातानीले प्रतिनिधिसभा ‘बन्धक’ जस्तै बन्नु संसदकै गरिमामाथिको प्रश्न हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न नसकेकै कारण संसद बैठक सरिरहेको छ ।
सभामुख चयनमा बाधक बन्दिनँ : उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सभामुख चयनमा बाधक नबन्ने बताएकी छन् । शुक्रबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएपछि तुम्बाहाङ्फेले आफ्ना कारण बैठक स्थगित नभएको बताएकी हुन् ।
सभामुख-उपसभामुखबारे नेकपामा अझै अन्योल
सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनका विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र अन्योल छ । सभामुख उम्मेदवार र उपसभामुख पद खाली गराउनेबारे नेकपा नेताहरूले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
उपसभामुख राजपाले पाउन सक्छ : महतो
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पार्टीले पाउन सक्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महतोले प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुख दाबी गरेपछि उपसभामुख प्रतिपक्षले पाउने महताेले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया पुस ११ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक पुस ११ गते एक बजे बस्ने दलहरुबीच सहमति बनेको छ ।
हिउँदे अधिवेशन : पहिलो काम सभामुख चयन अनि विवादास्पद विधेयक र सन्धि
विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन भोलि (शुक्रबार) बाट सुरु हुँदैछ । मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।
जाँदाजाँदै विवादमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको दाबीअनुसार उनी भावी सभामुखका लागि स्वाभाविक उम्मेदवार हुन् । उनी आबद्ध दल नेकपाले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे नै सभामुख होलिन् या नहोलिन् भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनदेखि उनी उपसभामुख भने नरहने निश्चित छ । करिब दुई वर्ष समय गुजारेर बाहिरिन लागेकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको कार्यकाल भने प्रश्नरहित रहेन ।